Posted on May 27, 2020 by Qeerroo
“Humnaan abbaan isaas akka isa reebu taasisuudhaan, dhagaa dugdatti hidhanii dullaan reebanii qaamni isaa erga raaamma’ee booda lubbuun darbe” yaada maatii namni irraa ajjeefamee
[SQ, Caamsaa 27,2020] Shaggar Kaabaa ona Dagam araddaa Leemman Caarraqii bakka addaa Buukkoo jedhamutti namni Habtaamuu Nugusee Roobii jedhamu, abbaa maatii kan ta’e waraana mootummaan reebichi hamaan irratti raawwatee ajjeefamuu isaa maatiin Sagalee Qeerroo Bilisummaa Oromoof himan.
Obbo Habtaamuu Nugusee Roobii jiraataa ona Shaggar Kaabaa yoo ta’an abbaa warraa ijoollee 5 ti. Haati warraa isaanii aadde Biraanee Dinquu yoo ta’an, ijoolleen isaan waliin qaban Burtukee Habtaamuu, Gaaddisee Habtaamuu, Dirribee Habtaamuu, Sisaay Habtaamuu fi Mangistuu Habtaamuu kan jedhamanidha.
“Obbo Habtaamuu Nugusee siyyaasa kam irraayyuu bilisa” jedhan namni yaada nuu laatan.
“Waraanni mootummaa dhagaa dugdatti hidhanii reebicha irratti raawwataa turuu fi, lafa hidhanii jiranitti humnaan akka abbaan isaa obbo Nugusee Roobii reeban taasisan” jedhan maatiin isaa sodaa nageenyaaf maqaa utuu nuu hineerin nuu hime.
Sababa Habtaamuu Nugusee haala kanaan akka reeban taasise gaafannee jirra. Namni yaada nuu laatan miseensa maatii obbo Habtaamuu keessaa akka nuu himanitti “Obbo Habtaamuu Nugusee abbaa isaa waliin mufannaa qabu turan. Kanaa jecha abbaan Habtaamuu obbo Nuguseen, qaamni mootummaa gorseefii akka walitti araarsuuf gaafatan” jedha.
Abbaan obbo Habtaamuu maanguddoon Nugusee Roobii jedhaman, akka inni reebamuuf osoo hintaane, gorsanii akka sirreessaniif eeruu kana qaama mootummaaf laatan jedhan kan yaada nuu kennan.
Reebichi akkamii akka irra gahe gaafannee “garaacha isaa irra adeemuun mi’a garaa isaa hedduun illee miidhame. Qaamni isaa reebichaan raamma’ee yaalaaf hospitaala galee mana damdamachuu dadhabee lubbuun darbe” jedhan.
Gochaan kun akka lakkoofsa Habashaatti baatii saddeerraffaa gaafa 4,2012 reebichi irratti raawwatee. Baatii Saddeettaffaa gaafa 17,2012 du’ee Eebla 18,2012 sirni awwaalchaa isaa raawwate jedhan.
Gochaa kana kan raawwate humna addaa Oromiyaa akka ta’e nuu himan. Humni addaa Oromiyaa lakkoofsaan nama 9 ta’an araddaa sana seenanii, isaan keessa namni sadii uleedhaaf waan kaaniin reebuu nutti himan kanneen yaada nuu laatan. Reebicha gaafa sanaan buusaan jilbaa isaa dhangala’uus himan.
Erga reebamee booda guyyaa muraasa qofaaf kan ture, baay’ee miidhamuu isaa irraa kan ka’e reeffa isaa walumatti suphinee walitti qabnee awwaalle jedhan.
Sababaa kanaan maatiin obbo Nugusee Roobii wal lagataa jiraachuus nuu himan. Waaanni humnaan abbaa ilma reebsisanii maatiin akka wal jibbullee taasisan jedhan. Ijoolleen obbo Habtaamuu fi haati warraa isaa mana obbo Nugusee lagataa akka jiranittidha kan yaada nuu laatan. Erga kun ta’ee waliin nyaataa akka hinjirres himanii, maatiin obbo Habtaamuu Nugusee Roobii abbaa isaa obbo Nugusee lagatanii akka jiran himu.
Qalbeessaa Dhangi’aa qindeesse.